Ngathi - Changzhou Precise Package Co., Ltd.
Iphakheji echanekileyo sele isungulwe kwaye ithembekile kunye nomthengisi ophicothiweyo we-BSCI ngaphezulu kweminyaka eli-10, ubukhulu becala sikwiindawo zokuthengisa kunye neebhegi zokwazisa ezinabasebenzi abali-100 kunye nezakhiwo zefektri ezingama-3000, nathi siyazingca ngeendlela ezininzi zeengxowa zephakheji uya kufumana kwikhathalogu yethu. Ingqokelela yethu yeebhegi yiza ngemibala emininzi kwaye yenziwe ngezinto ezinje ezingalukanga, i-PP ephothiweyo, i-RPET engalukwanga, iPolyester okanye iNylon, i-Canvas kunye neCotton, iJute kunye neBamboo, iNeoprene, iPV, iPEVA kunye nePhepha njl.
Yinjongo yethu ukuqhubeka nokuba yeyona nkampani ibalaseleyo yokuthengisa e China. Abasebenzi bethu banolwazi malunga nazo zonke iindlela zokuprinta ezikhoyo kwiimveliso zentengiso, kwaye unokukhetha ukusuka ekuprinteni kwesikrini, ukushicilela ichaphaza, ukuhambisa ubushushu, isitampu eshushu, i-lamination, i-laser, ukukrola, ukushicilela i-embossing kunye nabanye.
Kwiphakeji echanekileyo, singathanda ukukubonisa ukuba iingxowa ezikrelekrele kunye nezintsha zinokuba yindlela engabizi kangakanani yokwenza uluvo oluhlala luhleli kunye nokutsala amehlo kwimpawu yakho. Cinga ngepakeji echanekileyo njengokongezwa kweqela lakho lentengiso. Iingxowa zethu zempahla nayiphi na into inokuphinda isebenze kwaye inobuhlobo kwindalo. Into emnandi malunga nenkampani yethu lukhetho olungenamda kunye nenkonzo eyeyakho esibonelela ngayo. Iimveliso zilungelelaniswe ngokupheleleyo, sikwabonelela nangoyilo olukhululekileyo.
Iimveliso zethuinokusetyenziswa kumacandelo ahlukeneyo, kubandakanya iivenkile ezinkulu, amakhaya, ukupakisha, izipho kunye nentengiso. Ngoluhlu olubanzi, umgangatho ozinzileyo, amaxabiso afanelekileyo kunye nokuhanjiswa kwangexesha, iimveliso zethu zamkelwa ngokubanzi kwaye zithembekile ngabasebenzisi. Umzi-mveliso wethu ubekwe kwisixeko saseChangzhou, esiyi-180km kude neShanghai, iyure eli-1 ngololiwe, sonwabela ezothutho ezilula kakhulu. Wamkelekile ukuba unxibelelane nathi nanini na, impendulo ngokukhawuleza ngaphakathi kweeyure eziyi-12 iqinisekisiwe.
Ulwazi lwethu lwabathengi